ပေါင်သန်း ၃၀၀ ကျော်တန်တဲ့ လီဗာပူးလ်လူစာရင်း နော့ဝစ်ချ်နဲ့ပွဲမှာ ဘယ်လိုပွဲထွက်လာမှာလဲ? – Sports A2Z
ပေါင်သန်း ၃၀၀ ကျော်တန်တဲ့ လီဗာပူးလ်လူစာရင်း နော့ဝစ်ချ်နဲ့ပွဲမှာ ဘယ်လိုပွဲထွက်လာမှာလဲ?
လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂင် ကလော့ပ်အနေနဲ့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီ အဖွင့်ပွဲမှာ တကျော့ပြန်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ရည်စူးထားတဲ့ အတောင့်တင်းဆုံးလူစာရင်းကို ပွဲထွက်လာဖွယ်ရှိနေပြီး မန်စီးတီးကို စိန်ခေါ်မယ့် ပထမဆုံးခြေလှမ်းကို ခင်းကျင်းလာဖို့ ရှိနေချိန်မှာ ပေါင် ၃၁၆ သန်းတန်တဲ့ အင်အားကို ရဲရဲတင်းတင်း သုံးစွဲသွားတော့မှာပါ။
ဂိုးသမားနေရာမှာ နံပါတ် ၁ ဦးစားပေးအဖြစ် ပေါင် ၆၅ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူထားပြီး လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ သမိုင်းတလျှောက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးအမြင့်ဆုံးဂိုးသမားဖြစ်တဲ့
ဘရာဇီးလ်သား အယ်လစ်ဆန် ဘက်ကာ သေချာပေါက်တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီး သူက ကိုပါအမေရိကဖိုင်နယ်အထိ တက်ရောက်ထားပြီး ရာသီ​ကြိုအစီအစဥ်မှာ မပူးပေါင်းဘဲ အားမွေးနေပုံပါ။
ညာနောက်ခံလူနေရာမှာတော့ အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ထရင့် အလက်ဇန်းဒါး-အာနိုးလ်ဒ်က သူ့ရဲ့ ပင်တိုင်နေရာကို ဆက်လက်ကိုင်ဆုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ​ခြေစွမ်းပိုင်းအရ ဝေဖန်မှုတွေကို ခါးစည်းခံခဲ့တဲ့ ခွန်အားက ဒီရာသီမှာ ပြန်လည်ပေါက်ကွဲပြဖို့ ဖြစ်လာဦးမှာပါ။
ဗဟိုခံစစ်နှစ်ဦးနေရာမှာတော့ အလွတ်ကြေးနဲ့ ပူးပေါင်းလာခဲဲ့ပြီး အန်ဖီးလ်တပ်သားအနေနဲ့ ၆ ရာသီမြောက် ကစားမယ့် ဂျိုဝယ်လ် မာတစ်ပ်က ဒီရာသီမှာ RB လိုက်ပ်ဇစ်ကနေ ပေါင်သန်း ၃၆ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့ လူသစ် အီဘရာဟီမာ ကိုနာတေနဲ့ တွဲဖက်လာစေဖို့ ရှိပြီး ကလော့ပ်အနေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ကို ဗန်ဒိုက်နဲ့ ပင်တိုင်အတွဲဖြစ်လာဖို့ ပန်းတိုင်ထားရှိနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က တန်းဆင်းသွားခဲ့တဲ့ ဟားလ်စီးတီးအသင်းကနေ ပေါင် ၈ သန်းနဲ့ ပြောင်းလာခဲ့တဲ့ အန်ဒီ ရော်ဘတ်ဆန်ကတော့ ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာ ပွဲထုတ်ခံရမှာဖြစ်ပြီး ကွင်းလယ်ထောက်တိုင်နေရာမှာတော့ ပေါင် ၃၉ သန်းတန် ဖာဘင်ညိုနဲ့ ပေါင်သန်း ၂၀ တန် အသင်းခေါင်ဆောင် ဂျော်ဒန် ဟန်ဒါဆန်တို့က အသင်းကို မောင်းနှင်လာမှာပါ။
သီယာဂို အယ်လ်ကန်တာရာကို ပွဲထွက်ဖို့ မျှော်မှန်းမှု ရှိပေမယ့် ကလော့ပ်အနေနဲ့ နားချိန်အပြည့်အဝရထားတဲ့ နာဘီ ကီတာကိုသာ ရွေးသွားဖို့ ရှိနေပြီး သူ့ကို​တော့ ပေါင် ၅၃ သန်းနဲ့ ဝယ်ယူထားခဲ့တာပါ။ တိုက်စစ်မှူး ၃ ဦးမှာတော့ ဂျာမန်သားကြီး အားအကိုရဆုံး မိုဆာလား၊ မာနေး၊ ဖာမီနို့အတွဲကို ထုတ်သုံးသွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းခံထားရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ၃၁ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ အီဂျစ်ဖာရိုးကြီးက ဒီရာသီမှာ ရွှေဖိနပ်ဆုကို ထပ်မံပစ်မှတ်ထားလာဖို့ ရှိနေပြီး သူ့ကိုတော့ ​ပေါင် ၃၆ သန်းနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်း​က ရရှိထားခဲ့သလို ပေါင် ၂၉ သန်းတန် ရော်ဘတ်တို ဖာမီနိုကလည်း ဒီယိုဂို ဂျိုတာရဲ့ဖိအားကို ချေဖျက်သွားဖို့ ရှိနေပြီး ပေါင်သန်း ၃၀ နဲ့ ရရှိထားခဲ့တဲ့ မာနေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ခြေစွမ်းကျဆင်းမှုမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အကူအညီယူခဲ့ပြီးနောက် အကောင်းဆုံးပုံစံကို ပြန်လည်ရယူဖို့ အတက်ကြွဆုံးရှိနေတာမို့ စိတ်လှုပ်ရှားပေးစွမ်းမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲ ဖြစ်လာဦးမှာပါ။
ZAWGYI: လီဗာပူးလ္နည္းျပ ယာဂင္ ကေလာ့ပ္အေနနဲ႔ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ရဲ႕ ပရီးမီးယားလိဂ္ရာသီ အဖြင့္ပြဲမွာ တေက်ာ့ျပန္ခ်န္ပီယံျဖစ္ဖို႔ ရည္စူးထားတဲ့ အေတာင့္တင္းဆုံးလူစာရင္းကို ပြဲထြက္လာဖြယ္ရွိေနၿပီး မန္စီးတီးကို စိန္ေခၚမယ့္ ပထမဆုံးေျခလွမ္းကို ခင္းက်င္းလာဖို႔ ရွိေနခ်ိန္မွာ ေပါင္ ၃၁၆ သန္းတန္တဲ့ အင္အားကို ရဲရဲတင္းတင္း သုံးစြဲသြားေတာ့မွာပါ။
ဂိုးသမားေနရာမွာ နံပါတ္ ၁ ဦးစားေပးအျဖစ္ ေပါင္ ၆၅ သန္းနဲ႔ ေခၚယူထားၿပီး လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကးအျမင့္ဆုံးဂိုးသမားျဖစ္တဲ့
ဘရာဇီးလ္သား အယ္လစ္ဆန္ ဘက္ကာ ေသခ်ာေပါက္တာဝန္ယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး သူက ကိုပါအေမရိကဖိုင္နယ္အထိ တက္ေရာက္ထားၿပီး ရာသီ​ႀကိဳအစီအစဥ္မွာ မပူးေပါင္းဘဲ အားေမြးေနပုံပါ။
ညာေနာက္ခံလူေနရာမွာေတာ့ အသင္းရဲ႕ အေကာင္းဆုံးအကယ္ဒမီထြက္ကစားသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ထရင့္ အလက္ဇန္းဒါး-အာႏိုးလ္ဒ္က သူ႔ရဲ႕ ပင္တိုင္ေနရာကို ဆက္လက္ကိုင္ဆုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီက ​ေျခစြမ္းပိုင္းအရ ေဝဖန္မႈေတြကို ခါးစည္းခံခဲ့တဲ့ ခြန္အားက ဒီရာသီမွာ ျပန္လည္ေပါက္ကြဲျပဖို႔ ျဖစ္လာဦးမွာပါ။
ဗဟိုခံစစ္ႏွစ္ဦးေနရာမွာေတာ့ အလြတ္ေၾကးနဲ႔ ပူးေပါင္းလာခဲဲ့ၿပီး အန္ဖီးလ္တပ္သားအေနနဲ႔ ၆ ရာသီေျမာက္ ကစားမယ့္ ဂ်ိဳဝယ္လ္ မာတစ္ပ္က ဒီရာသီမွာ RB လိုက္ပ္ဇစ္ကေန ေပါင္သန္း ၃၆ သန္းနဲ႔ ေခၚယူထားခဲ့တဲ့ လူသစ္ အီဘရာဟီမာ ကိုနာေတနဲ႔ တြဲဖက္လာေစဖို႔ ရွိၿပီး ကေလာ့ပ္အေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူ႔ကို ဗန္ဒိုက္နဲ႔ ပင္တိုင္အတြဲျဖစ္လာဖို႔ ပန္းတိုင္ထားရွိေနပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္က တန္းဆင္းသြားခဲ့တဲ့ ဟားလ္စီးတီးအသင္းကေန ေပါင္ ၈ သန္းနဲ႔ ေျပာင္းလာခဲ့တဲ့ အန္ဒီ ေရာ္ဘတ္ဆန္ကေတာ့ ဘယ္ေနာက္ခံလူေနရာမွာ ပြဲထုတ္ခံရမွာျဖစ္ၿပီး ကြင္းလယ္ေထာက္တိုင္ေနရာမွာေတာ့ ေပါင္ ၃၉ သန္းတန္ ဖာဘင္ညိဳနဲ႔ ေပါင္သန္း ၂၀ တန္ အသင္းေခါင္ေဆာင္ ေဂ်ာ္ဒန္ ဟန္ဒါဆန္တို႔က အသင္းကို ေမာင္းႏွင္လာမွာပါ။
သီယာဂို အယ္လ္ကန္တာရာကို ပြဲထြက္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းမႈ ရွိေပမယ့္ ကေလာ့ပ္အေနနဲ႔ နားခ်ိန္အျပည့္အဝရထားတဲ့ နာဘီ ကီတာကိုသာ ေ႐ြးသြားဖို႔ ရွိေနၿပီး သူ႔ကို​ေတာ့ ေပါင္ ၅၃ သန္းနဲ႔ ဝယ္ယူထားခဲ့တာပါ။ တိုက္စစ္မႉး ၃ ဦးမွာေတာ့ ဂ်ာမန္သားႀကီး အားအကိုရဆုံး မိုဆာလား၊ မာေနး၊ ဖာမီႏို႔အတြဲကို ထုတ္သုံးသြားမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းခံထားရပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီက ၃၁ ဂိုးသြင္းခဲ့တဲ့ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုးႀကီးက ဒီရာသီမွာ ေ႐ႊဖိနပ္ဆုကို ထပ္မံပစ္မွတ္ထားလာဖို႔ ရွိေနၿပီး သူ႔ကိုေတာ့ ​ေပါင္ ၃၆ သန္းနဲ႔ လီဗာပူးလ္အသင္း​က ရရွိထားခဲ့သလို ေပါင္ ၂၉ သန္းတန္ ေရာ္ဘတ္တို ဖာမီႏိုကလည္း ဒီယိုဂို ဂ်ိဳတာရဲ႕ဖိအားကို ေခ်ဖ်က္သြားဖို႔ ရွိေနၿပီး ေပါင္သန္း ၃၀ နဲ႔ ရရွိထားခဲ့တဲ့ မာေနးကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီက ေျခစြမ္းက်ဆင္းမႈမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အကူအညီယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အေကာင္းဆုံးပုံစံကို ျပန္လည္ရယူဖို႔ အတက္ႂကြဆုံးရွိေနတာမို႔ စိတ္လႈပ္ရွားေပးစြမ္းမယ့္ ပရီးမီးယားလိဂ္အဖြင့္ပြဲ ျဖစ္လာဦးမွာပါ။
ချဲလ်ဆီးနဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေအပေါ် သူ့အမြင်ကို ပြောသွားခဲ့တဲ့ ဟားလန်း